Maitiro Ekudzivirira Saiti Yekutama Kuzviuraya | Martech Zone
Maitiro Ekudzivirira Saiti Yekutama Kuzviuraya
Mubvunzo wedu wekutanga kana mutengi atiudza kuti vachazogadzira saiti nyowani ndeyekuti hutongi hwepeji uye chinongedzo chimiro chichachinja. Kazhinji yenguva mhinduro ndiuye ... uye ndipo panotanga mafaro. Kana iwe uri kambani yakamisikidzwa iyo ine saiti kwechinguva, kutamira kune itsva CMS uye dhizaini kunogona kunge kuri kufamba kukuru ... asi kusatungamidza traffic iriko kwakafanana nekuzviuraya kweSEO.
Traffic iri kusvika kune yako saiti kubva kune zvawanikwa ... asi iwe wakangovatungamira kune iyo 404 peji. Traffic iri kusvika kune yako saiti kubva kuakagovaniswa maratidziro enhau enhau… asi iwe wakangovatungamira kune iyo 404 peji. Zvemagariro kutaurwa kuverenga pa URL ikozvino taura 0 nekuti magariro kuverenga maapplication senge Facebook anoda, Twitter maTweets, LinkedIn masheya, uye vamwe vanochengetedza iyo data inoenderana neiyo URL… iyo yauchangobva kuchinja. Iwe unogona kusatomboziva kuti vanhu vangani vari kuenda vakananga kumapeji makumi mana nemana nekuda kwenzvimbo zhinji usataure iyo data kune ako analytics.
Zvakaipisisa pane zvese, iro rakaunganidzwa rakakosha kiyi chiremera chiremera iwe chawakavaka pa peji kuburikidza Backlinks iko zvino kukandwa nepahwindo. Google inokupa mazuva mashoma ekuigadzirisa… asi kana vasingaone shanduko, vanokudonhedza sembatatari inopisa. Hazvina kuipa zvese, zvakadaro. Unogona kupora. Mufananidzo uri pamusoro ndewewe mutengi wedu uyo ​​akarasikirwa pamusoro pe50% yeavo ese organic search traffic, software demos, uye pakupedzisira bhizinesi nyowani. Isu takavapa ne SEO kutama chirongwa kune zvinongedzo asi zvakafuratirwa nekuburitswa kwesaiti nyowani sekukoshesa zvakanyanya.
Chinokosha ichocho chakachinja.
Iyo kambani yakapinda zviuru zvekudzosera muserver yavo. Mushure memavhiki mashoma, Google yakacherekedza ndokuvadzosera kwavakange vari. Izvo zvainge zvisina pasina kutya kwakanyanya uye kusarara usiku nechikwata, zvakadaro. Hunhu hwenyaya apa ndewekuti kuvaka saiti nyowani ine nyowani zvimiro zvekubatanidza inogona kunge iri zano rakanaka (SEO vakomana dzimwe nguva vanopokana kusvika kurufu) nekuda kwekuwedzera kweshanduko kwaunogona kuwana. Asi, asi, asi… ita chokwadi kune 301 redirect yako ese marinki.
Iwe ucharamba uchirasikirwa nehukama hwako huwandu. Tiri kuyedza nedzimwe nzira dzekumisa izvo kuti zvirege kuitika kwatinochengetera chinongedzo chechinyorwa chekare uye tobva tavandudza chimiro chechinhu chitsva. Kuchava kunonakidza!
Vhidhiyo: Chii chinonzi Brand?
Bhokisi Inoita Faira Kugovana Nyore